Jana Novotna: Xiddigtii Tennis-ka Oo Geeriyootay | Himilo Media Group
Jana Novotna oo hore ugu guuleysatay tartanka Tennis-ka ee Wimbledon ayaa geeriyooday iyadoo ay da’deedu ahayd 49 jir.
Haweenaydan ayaa u geeriyootay xanuunka Cancer-ka oo ay muddo dheer la tacaalaysay, waxaana sida uu xaqiijiyey xidhiidhka haweenka Tennis-ku ay ku dhex geeriyootay qoyskeeda oo dhinacyo taagan.
Novotna oo u dhalatay waddanka Czech ayaa ku guuldarraysatay tartanka Wimbledon sannadihii 1993 iyo 1997 ka hor intii aanay si xarrago leh ugu guuleysanin Grand Slam Tournament sannadkii 1998 markaas oo ay garaacday Nathalie Tauziat.
Novotna ayaa qabsatay quluubta taageereyaasha markii ay oohin garoonka la dhex fadhiisatay sannadkii 1993 oo ay khasaare ba’an kala kulantay Steffi Graf oo u dhalatay waddanka Germany, kana mid ahayd dadka looga dambeeyo ciyaaraha Tenniska waayadaas.
Guddoomiyaha xidhiidhka kubadda Tenniska adduunka oo lagu magacaabo Steve Simon ayaa sheegay in Novotna lagu xasuusan doono guulihii iyo waxyaabihii ay ka samaysay garoomada, waxaana tacsi ay gaadhsiiyeen qoyska ay ka baxday.
Novotna ayaa loo aqoonsanaa wakhtiyadii ay garoomada ku jirtay inay lambarka labaad ee adduunka ku jirto, waxaase u diiwaangashan inay hal mar oo kaliya hantiday Wimbledon. Waxa kale oo u yaalla rikoodh ah inay 12 jeer ku guuleysatay tartanka Grand Slam iyo afar jeer oo ay tartanka laba-labada ee Grand Slam si xarrago leh ugu damaashaadday.